Muvhimi - Kudanwa Kwemusango: Mazano uye Zvinoonekwa - Game Point - Bhodhi Mitambo neMitambo yeVhidhiyo
Pakutanga kwedambudziko reCorona, vazhinji vakazvionera mitambo yepamhepo. Ndiwo mabatiro azvakaita uye ndakaedza ruoko rwangu kunharaunda yevavhimi semuvhimi chaiwo. Anopfuura maawa mazana matatu ekutamba gare gare, muvhimi simulator "The Hunter - Call of the Wild" haasati andiregedza. Ziva kuti sei mutambo uyu uchigona kupindwa muropa muchinyorwa chino.
Chekutanga pane zvese, zvinofanirwa kutaurwa kuti zvese zvinotevera zvirevo zvinoreva PC vhezheni (Steam). Mutambo uyu unomhanya zvakafanana pamaconsoles, asi vamwe vashandisi vanosangana nematambudziko anogara aripo paXbox kana Playstation. Uye kusiyana nePC vhezheni, maDLC anowanzo kunonoka. "The Hunter - Call of the Wild" yakaonekwa mushure me "The Hunter - Classic" uye haina kungosiyana mumutengo. Kudanwa Kwemusango kunofamba mundima yeakajairwa simulators nekupinda nyore, nepo Classic yakanyanya kuona uye yakaoma kutamba.
Zvakatanga sei ...
Gore rapfuura mugadziri akakoka Expansive Worlds kubhejera pa "The Hunter - Call of the Wild" mahara. Saka ini neimwe shamwari yangu takaenda kunotsvaka. Matanho ekutanga anoita seanononoka. Kunyanya kana iwe wakajaira kupfura nekuita zvishoma, "Call of the Wild" inoshanda senge rollator simulator. Maawa anofamba, kunyangwe pasina zvakawanda zvaitika.
Nheyo yacho inonzwika iri nyore
Zviri nyore chaizvo: tora pfuti yakazara, mhanya nekumaruwa, uye paunoona mhuka, unoibvisa. Iyi nzira yekutamba inogoneka, asi kwete padanho 1. Kufamba famba semupengo kunovhundutsa zvese zvine nzeve uye zvinogona zvakare kuverengerwa mumatanda. Muchiitiko changu, kune mhuka dze85.000 dzandakadzinga nemheremhere (kune rumwe rutivi ndine 2.000 chete inouraya). Uye ipapo iwe unofanirwa kupfura chombo chakakodzera nepfuti chaiyo pamhuka chaiyo uye nhengo dzakakodzera.
Call of the Wild ndiyo yakawanda yekufamba simulator uye inogona zvakare kuridzwa nemagirazi eVR. Kuti utange, ndapfupikisa matipi mashoma evanotanga pakupera kwechinyorwa.
Muongorori mandiri anoda kuongorora uye izvo zvinogona kusanganiswa zvinoshamisa neshamwari. Hurukuro dzedu paTeamspeak dzinonzwika sekubva munharaunda yechitendero. Tinoda kutsvaga hotspots, kuvandudza dzidziso uye, pamusoro pezvose, tsvaga chinhu chimwe chete: madhaimondi.
MuKudana Kwemusango, mhuka yaunovhima inoongororwa. Mubairo wepamusoro ndewe 'diamond'. Kuti upfure mhuka ine mutsauko we'Diamond', maparamita akati wandei anofanirwa kufananidzwa.
Mhuka inofanira "kukwanisa kugadzira" madhaimondi
Pamusoro pazvose, izvi zvinoda varume vakuru vanogona kuita mikombe yedhaimani. Pakutanga iwe unogona kutaurira nekuonekwa kweimwe mhuka yemhuka kana ine mukana wedhaimondi, somuenzaniso: kubva kumakumbo. Kana uine mazinga akakwana pasi pebhanhire rako, zvino zviri nyore uye mabhinoculars anoratidza mararamiro emhuka imwe neimwe, iyo inogona kuva nayo mushure mekupfurwa.
Kutanga "kunofanira kunge kwakanaka"
Sezvatotaurwa, unofanira kurova nhengo dzinokosha dzakadai semapapu, mwoyo uye chiropa nebhora rakakodzera kuitira kuti mhuka yacho ikurumidze kuwira pasi. Neraki, pfuti yechipiri inobvumidzwa, nekuti nguva nenguva unongorova iyo yekumashure kumagumo nekuti mhuka haingodi kuramba yakanyarara.
Uye ndiyo chaiyo chikamu chimwe muzana chemutambo chiri kunetsa, asi zvakare chinopa mubayiro. Fungidzira: Unofamba-famba munzvimbo yakanaka kwemaawa uye unoona boka remhembwe mahesera mushure meimwe, asi hapana kana mukombe mukuru pakati pawo. Usati wada kudzima PC, zvinoitika!
Ukatarira kekupedzisira mumabhainokura, unoona mumwe murume ane dhaimani ringangove rakayerwa. Iye zvino unogona kuva nechokwadi chokuti unenge wakabatikana kweinenge hafu yeawa. Kuverevedza uye kuona mhuka yacho zvakanaka kunotora nguva.
Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchi kufema chinhambwe , inguva yekubata mweya wako uye neku kurumidza kubaya mapapu ako nepfuti chaiyo . Panguva ino ndinowanzobvarurwa netension. Nekuti ndipo panogona kukanganisa zvinhu: Imwe mhuka inomira pamberi payo panguva yekupedzisira, unoonekwa uye munhu wese anobva aenda zvichingodaro.
Mhuka shoma dzine mwero wedhaimani dzandakatenderwa kupfura:
[foogallery id = "32668 ″]
Dzimwe mhuka dzinowira pakarepo mushure mekupfura muThe Hunter - Call of the Wild, dzimwe dzinonzwa sokuti dzichiri kufamba kwemakiromita pamampas kusvikira pakupedzisira dzarova pasi. Paunongomira pamberi pemhuka, unogona kufungidzira kana ichawana chiyero chedhaimani uye ikozvino inouya iyo inonakidza nguva: Iyo nzira yemunwe wako, iyo inofamba zvishoma nezvishoma yakananga kune vara 'E' pakhibhodi yako. Kudzvanya uku kunovhura skrini yekukohwa uye pakarepo inoratidza chiyero.
Zvinobva zvajeka kana zvese zvakapihwa chiyero chedhaimani. Panogonawo kuva nenguva dzinoodza mwoyo chaizvo kana iwe ukabatwa ne troll. Troll mhuka dzine mukana wakakura kwazvo wekuhwina dhaimani, asi pakupedzisira kungopotsa kana kure kure kupotsa chiyero chepamusoro.
Kune zvakare mwero wepamusoro kupfuura diamond. Izvi zvinonzi "Mukuru" uye zvinogona kusvikwa chete nemhembwe chena-muswe uye, munguva pfupi yapfuura, zvakare nemhembwe tsvuku. Nekudaro, mukana weMukuru mudiki zvekuti ini pachangu ndinoshaya chekukurudzira kana kuedza. Mukana wekurohwa nemheni wakakura zvakanyanya.
Muvhimi: kunyudzwa kwepamusoro, nyaya shoma dzepamusoro
Vasara 99% vakasununguka zvikuru. Ndinoramba ndichizvibata ndichinakidzwa nekuona kwechokwadi mumutambo uyu. Dzimwe nguva idyll yakanaka zvinoshamisa, kunyangwe ingori mabhiti nemabhati. Pakutanga ndakazvichengeta ndiri kupenga zvishoma apo ini "ndakakwevera mukati" maonero asina kunaka ane mwedzi wakazara. Nenguva isipi zvakazoitika kuti handisi ndega neizvi. Pamusoro pemikombe, Steam zvakare ine matani ezvidzitiro zvemaonero akanaka kwazvo. Ingave munzvimbo yeRussia ine sinou, mumasango eGerman kana paRocky Mountains - mepu yega yega ine hunyanzvi hwayo uye dhizaini yekurira inowedzera kunyura. Sezvineiwo, Kudanwa Kwemusango ndiwo wega mutambo wandinotora zvisingaverengeki skrini. Hapana mumwe mutambo unondiyedza kutora akawanda mascreenshots.
Heano mashoma ezviratidziro ezvimiro zvisina kunaka muKudaidza Kwemusango:
[foogallery id = "32690 ″]
Call of the Wild zvibodzwa nekunyudzwa kwakabudirira kwazvo. Nyaya dzacho dzakati sandarara asi. Ivo havana kumbondiita kuti ndienderere mberi uye kuongorora neshamwari kwaingonakidza pane kusangana nazvo kuburikidza nenyaya.
Yambiro vaparadzi: Pamwe imhaka yekuti hapana kana NPC imwechete mumutambo - yekutamba yemahara, haidi imwe futi. Mepu yeVurhonga iri munzira yevanobira zvisiri pamutemo uye chirongwa ichi chinonakidza. Mutauriri wacho anoti vanovhima zvisiri pamutemo vane ngozi uye vari pedyo zvikuru. Kana iwe wakaona kuburikidza kuti mutambo hauna maNPC, saka hapana njodzi yekupfurwa pasi. Zvingangoitika zvakanyanya kuti nyati ichakutsika-tsika. Ingomaka chinyorwa chiri pamberi pacho kuti chionekwe!
Izvo izvo mutambo wacho unonyatso nyatso unokwanisa kuuputira zvakare nemabhugi. Kune matani emabhugi uye matsva anowedzerwa nekuburitswa kutsva kwemepu.
Wakambotamba mazana emaawa eThe Hunter - Call of the Wild uye wakaratidza huwandu hwemikombe munzvimbo yako yekugara? Izvo zvakanaka - kusvika rimwe zuva chigadziriso chadzima mikombe yako yese uye pekugara yako inoita serenje. Mhinduro ndeyokuti "Ndinokutendai pasina, Nyika Yakakura!". Zvakare zvinoitika: madhaimondi asingaverengeki, famba nekukurumidza kuenda kunzvimbo dzausingade kuenda, quad drives husiku pasina mwenje, njanji dzinongonyangarika, hanzi dzisingawanikwe, dzinokandwa mumhepo kana vatambi vaviri vachida. kubereka pane imwe nguva uye zvimwe zvakawanda. Kupwanya uye zvinoshamisa mhuka mifananidzo zvakare chikamu chayo, asi hazvisi pakati pezvinokanganisa zvakanyanya.
Mazhinji emabhugi aya anonyanya kuwanikwa mune yevazhinji modhi. Kutonyanya kusvota ibug yakasarudzika inovhundutsa mhuka kana vamwe vashandi vakachinja zvombo. “Hey, ndawana boka remhembwe tsvuku. Huya, tibvise nzvimbo iyi! " Kufamba nekukurumidza, kuenda kune yakataurwa uye kana uchichinja zvombo, pfuti (kurira) inokonzeresa zvekuti iwe haugone kuzvinzwa iwe pachako. "MUKURU, NDIANI ACHANGE ABOKA ???". Zvakanaka - hapana akapfura uye zvese zvine nzeve nemvere zvakapera kare.
Neraki, mamwe mabhugi muThe Hunter - Call of the Wild anogona kushandiswa kurima kana mhuka dzakanamira munzvimbo uye dzisingakwanise kutiza. Sezvineiwo, dzimwe tsikidzi dzinovaraidzawo uye dzinoita kuti moyo wemuvhimi useke.
Mabhugi anoramba achitsamwisa nharaunda uye nerukova rwese rwunobva kuExpansive World kune vakati wandei vanotaura nezvazvo. Apa ndipo chaipo pane dambudziko hombe: Kune mashoma dzimwe nzira dzevatambi uye chero bedzi pasina, Expansive World inogona "kutenga" yakawanda. Ivo vanogadzira vanogona kubatsirika kubva pakuvhurika kwavo kune social media.
Heano mashoma akasarudzwa mabhugi andakasangana nawo ini:
[foogallery id = "32653 ″]
Kunyangwe mabhugi, mutambo wakasimba unogona kukanda zviperengo zvawo nyore kuburikidza nekunyudzwa kwayo kwakanaka. Spark inofanira kusvetukira ipapo kutanga. Ndakaita rombo rakanaka rekukwanisa kutora chikamu nenharaunda yevavhimi vane ruzivo kubva pakutanga. Zvinhu zvakawanda zvinoenda nyore kana iwe uchigona kubvunza mibvunzo.
Call of the Wild rookie kukanganisa
Heano mamwe matipi eThe Hunter - Call of the Wild kuti zvive nyore kwauri kuti utange:
Unotanga nemepu yakaoma
Zvinoenderana nekuongororwa kwakaitwa neExpansive World, 'Hirschfelden' ndiyo inonyanya kufarirwa mepu, asi izvo zvinowanzoitika nekuda kwekuti ndiyo zvakare yekutanga uye inosanganisirwa mumutambo wepasi. Iyo 2020 mepu 'Silver Ridge Peaks' ine Rocky Mountain Flair inonyanya kutanga-hushamwari. Iwe unonyanya kuona mhuka nekuda kwenzvimbo dzakawanda dzakavhurika uye huwandu hwemhuka hwakakura. KuHirschfelden, kune rumwe rutivi, kune sango rakawanda uye hazviiti kuvhima kuve nyore. Kunyanya kana iwe uchifanira kutsvaga mhuka yakakuvara mugwenzi.
Iwe hauzowani chero mhuka
Pamwe uri kufamba zvine ruzha, unoonekwa nekuti chifukidziro chako chakashata kana kuti unonhuwa mhuka dzakananga kumhepo. Iwe unogona kudzungaira musango uye paunongonzwa nzira nyowani kana kufona, unoita stalking mode (mira uye wakakotama). Zvinosuruvarisa, kufamba kunongonyarara mumugwagwa. Zvinogonawo kuva kuti uri panzvimbo isiri iyo panguva isiri iyo. Mhuka dzine dzimwe nguva padzinorara, padzinodya nekunwa. Kana wangoziva nguva dzekunwa dzerudzi rwemhuka, izvi zvinoshanda kune mepu yese.
Hausviki munhambo huru
Muvhimi chaiye (chaiye) aizokurumidza kuziva chikonzero, asi kune vanotanga zvinofanirwa kunzi: Bhora rinorasikirwa nehurefu pamadaro marefu. Naizvozvo ingonanga kumusoro zvishoma uye iwe ucharova mhuka nemazvo. Nemamwe mazinga, kuongorora zvakare kunova nyore. Kana mhuka iri kure zvakanyanya kwauri, unogona kukwezva dzimwe mhuka dzemhando nemapombi nezvimwe.
Kune zvakare zvinhu zvaunongoita kaviri - kamwe chete uye hauzombofi zvakare:
kushambira: Iwe haugone kushambira muKudana Kwemusango. Iwe unongoberekwa wadzokera munyika. Kangani kandakashuvira igwa? Pamwe shuviro yangu ichazadzikiswa rimwe zuva.
Pfura kunze kwemiganhu yemepu: Usavhime padyo nemiganhu yekunze, nekuti kana mhuka inovhimwa ikapera pamepu, haungakwanise kuiwana zvachose. Iwe unongova nemasekonzi mashoma kusvika mutambo wakudzosera kumashure mukati memiganhu. NeQuad (DLC) unogona kuvhara mamwe madaro kunze kwemepu.
Reset mabhenefiti: Mukati memutambo unowana mapoinzi anobatsira aunogona kugovera pamuti wehunyanzvi. Nyatsofunga nezveunyanzvi hwaunoda. Iwe unogona kuseta zvakare sarudzo, asi inodhura zvakanyanya. Hautombodi hunyanzvi hunotevera: Kufanotaura mhepo, kufanotaura mamiriro ekunze, 15 muzana yehutano hwakawanda.
Kune zvakawanda zvakawanda zvekudaidza Musango, asi ini ndichakurega iwe uzvitsvakire wega muThe Hunter - Call of the Wild.
Nintendo Switch (OLED modhi) White + Metroid Dread [Nintendo ... * 392,75 EUR tenga
Kare TikTok dambudziko reJust Dance 2022 iri kushanda
Inotevera Luna Maris muSpieleschmiede: matambudziko einjini
Roccat Kain 200 AIMO isina waya yekutamba mbeva inokunda musika
WWE 2K22 gameplay inoratidzwa mune itsva turera